ပင်လယ်စာချ ဉ်ငံစပ် ဟင်းရည်ကြည်( Hot & Spicy Seafood Clear Soup) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ပင်လယ်စာချ ဉ်ငံစပ် ဟင်းရည်ကြည်( Hot & Spicy Seafood Clear Soup)
ပုစွန်နဲ ပါဝင်ပင်လယ်စာတွေကို အရံသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်..။
အိုးတစ်လုံးမှာဟင်းရည်ကြည်ကိုအပူပေးပြီး..ငါးငံပြာရည် ၊ ကြက်သားမှုန်.
၊ဟင်းခတ်မှု န်. ၊ငရုတ်ကောင်း( ၁ဇွန်း ထမင်းစားဇွန်း) တို.နဲ.အရသာသွင်းပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ၂ တက်နဲ ငရုတ်သီးစိမ်း(၅) တောင့်ခန်.ကိုဓါးပြားရိုက်ထည့်ပါတယ်။
ထို.နောက် ပဲပြားတုံးလေးတွေနဲ.ကောက်ရိုးမှို၊ ၊အရွက်စိမ်းတစ်မျိုး ကိုထည့်ပြီး တရုတ်နံနံ+ကြက်သွန်မြိတ်တွေနဲ.အလှဆင်သလို ငရုတ်တောင့်နီ၃ တောင့်လောက်နဲ.အလှဆင်
မှတ်ချက် ။ ချက်ပြုတ်ပြတဲ့ပုံစံကိုတိုက်ရိုက်ရေးတင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..။